November 3, 2019 - Hargeele - Wararka Somali State
Ethiopia News November 3, 2019
PM Abiy Ahmed warns Ethiopia ethnic violence could worsen Al Jazeera English Ethnic tensions rise in Ethiopia NHK WORLD Violence during Ethiopian protests was ethnically tinged, say eyewitnesses Reuters Orthodox Ethiopians criticise PM Abiy over deadly clashes Yahoo News Ethiopia PM Abiy warns ethnic violence could worsen Standard Digital View full coverage on Google NewsSii akhriso
Ethiopia violence: Facebook to blame, says runner Gebrselassie BBC NewsSii akhriso
Pope prays for Christians and other victims of violence in Ethiopia Vatican NewsSii akhriso
The threat of intraethnic strife in Ethiopia – Al Jazeera English
The threat of intraethnic strife in Ethiopia Al Jazeera EnglishSii akhriso
Ethiopia PM Abiy says death toll from recent protests rises to 86 Reuters IndiaSii akhriso
Ethiopia says 78 killed in protests against treatment of activist Al Jazeera EnglishSii akhriso
Cayaaraha November 3, 2019
(Paris) 03 Okt 2019. Madaxweyne ku xigeenkii hore kooxda Monaco ee Vadim Vasilyev ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wadahadal dhex maray isaga iyo Kylian Mbappé ka hor inta uusan ku biirin naadiga Paris Saint-Germain xagaagii 2017-kii. Paris St Germain ayaa labo sano iyo bar kahor waxay kaga qaadatay kooxda Monaco heshiis hal xilli ciyaareed oo qaab […]Sii akhriso
Soomaaliya November 3, 2019
Muqdisho (SONNA)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan soo dhaweyn ah la qaatay Madax ka socotay Bangiga Adduunka oo dalka u yimid dhammeystirka hannaanka deyn cafinta Soomaaliya oo haatan gabo-gabo maraya. Kulankan oo ay qeyb ka ahayd qado sharafeed Madaxweynuhu uu u fidiyey Madaxda ka socotay Bankiga Adduunka ayaa Sii akhriso
(Milano) 03 Nof 2019. Kooxda AC Milan ayaa lasoo warinayaa inay labo xiddig oo da’yar ah ee ka tirsan Real Madrid amaah kula soo wareegayso suuqa kala iibsiga bisha Janaayo ee soo aaddan. Waxaa dhowaan la soo wariyey in Milkiileyaasha Kooxda Rossoneri ay diyaar u yihiin inay xoojiyaan kooxda suuqa jilaalka ee soo aaddan kaddib […]Sii akhriso
(Liverpool) 03 Nof 2019. Xiddiga reer Senegal iyo kooxda Liverpool ee Sadio Mané ayaa sheegay inuu wali ka fog yahay heerka ay gaareen xiddigaha Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi. Sadio Mané ayaa dhinaca kale tilmaamay inuu u sameyn doono wax walba si uu kaliya ugu dhawaado heerarkooda. Sadio Mane ayaa xagaagii 2016-kii wuxuu yimid Liverpool, […]Sii akhriso